जुम्लामा ४१ हजार व्यक्तिलाई कोरोना विरुद्धको खोप
११ सेकेन्ड अघि लोकान्तर
जुम्लामा १८ वर्षमाथिका ४१ हजार नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप दिन लागिएको छ । शनिवारदेखि जुम्लाका १८ वर्षमाथिका ४१ हजार ६७६ जनालाई खोप लगाउने लक्ष्य रहेको बताइएको छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालयका प्रमुख कृष्ण सापकोटाले जिल्लाको कूल जनसंख्याको ३३...
यथार्थमा हाँस्न नसक्ने मान्छे कसैको वृत्तान्त सुनिरहँदा रून खोजिरहेको छ। साहसिक मुटुलाई चुनौती दिने एउटै शब्द- ब्रेकअप ! सुनिरहँदा पनि समतुल्य जीवनबाट उनको अमूल्य जीवनका प्रभाविला तरङ्गहरूको चित्कारलाई नियालिरहेको छ। प्रत्येक रातसँग सम्झौता गर्ने प्रकृतिलाई आज दिनले पनि परीक्षा लिइरहेको...
दैलेख – दैलेखको तोलिजैसीमा अरिङ्गालको टाेकाइबाट एक जनाकाे ज्यान गएकाे छ । ठाँटीकाँध गाउँपालिका–५ तोलीजैसीका ४८ वर्षीय देवबहादुर शाहीको अरिङ्गालको टोकाइबाट ज्यान गएकाे जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखका इञ्चार्ज प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) अनुपम श्रेष्ठले बताउनुभयो । हिजो दिउँसो छोराको सर्टिफिकेट लिन...
राजधानीबाट ९५ लाख रुपैयाँसहित दुई जना भारतीय पक्राउ
प्रहरीले काठमाडौं उपत्यकाबाट ९५ लाख रुपैयाँसहित दुई जना भारतीय नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ । चितवनबाट काठमाडौं आउँदै गरेको यात्रुबाहक हाइस गाडीबाट प्रहरीले स्रोत नखुलेको रकमसहित दुई जना भारतीय नागरिकलाई शुक्रबार राति पक्राउ गरेको हो । पक्राउ पर्नेहरुमा भारत मुम्बई महाराष्ट्र...
सागरभित्र सास फेर्दै निर्दोष जीवन
सन् २०२१ को लागि ‘ओशन फोटोग्राफर अफ द इयर’ अवार्ड ऐमी जानले पाएका छन्। उनले समुद्रमा बस्ने हरियो समुद्री कछुवाको तस्वीर खिचेका थिए। उनले यो तस्वीर पश्चिमी अष्ट्रेलियाको निगालु कोरल रीफ नजिक खिचेका हुन्। प्रतियोगितामा हेनली स्पीयर्स दोस्रो भएका छन्।...
भरतमोहन अधिकारीकी छोरी लीमा माधव नेपालको पार्टीमा
वरिष्ठ वामपन्थी नेता एवं पूर्व अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी पुत्री लीमा अधिकारी सक्रिय राजनीतिमा आउने भएकी छन् । लीमाले अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी (एस) बाट राजनीति गर्ने भएकी हुन् । नेकपा एसले उनलाई बागमती प्रदेश कमिटी...
चीनले आफ्ना २ नागरिक छाड्नासाथ क्यानडाले गर्‍याे हुवावेकी मेङ वान्झाउ रिहा
चीनले तीन वर्षदेखि जेलमा राखेका दुई क्यानडेली नागरिकलाई रिहा गरेको छ। क्यानडाले पनि पक्राउ परेकी हुवावेकी कार्यकारी वित्तीय अधिकृत मेङ वान्झाउलाई शुक्रबार राति नै रिहा गरेको छ।​ क्यानडेली प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले मेङको रिहाइको पुष्टि गर्दै दुई नागरिक चिनियाँ जेलबाट मुक्त भएको...
दुईजना भारतीयको साथबाट ९५ लाख रुपैयाँ बरामद
प्रहरीले दुईजना भारतीय नागरिकको साथबाट स्रोत नखुलेको ९५ लाख रुपैयाँ बरामद गरेको छ। शुक्रबार दिउँसो महानगरीय प्रहरी प्रभाग नागढुंगाको टोलीले बाहिरबाट आउने सवारीसाधन थानकोटमा चेकजाँचका क्रममा उक्त परिमाणको नेपाली नगद बरामद गरेको हो। प्रहरीका अनुसार चितवनबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको ग...
श्वेता खड्का : रोजे जस्तो हुन्न जीवन
पीडाहरु बटुलेर, रोही रहुँ जस्तो लाग्छ खुसीहरु समेटेर, हाँसी रहुँ जस्तो लाग्छ आँशु-आँशु हुन्न जीवन खुसी-खुसी हुन्न जीवन भेट्यो जस्तै उस्तै हुन्छ, सोचे जस्तो हुन्न जीवन श्वेता खड्का के बन्न चाहन्थिन् ? अतितलाई फर्केर हेर्दा उनलाई यही प्रश्नले विथोल्छ ।...
सिटिजन्स बैंकले १२ प्रतिशत बोनस दिने
सिटिजन्स बैंकले आफ्ना सेयरधनीहरूलाई १२ प्रतिशत बोनस सेयर दिने भएको छ । कम्पनीको शुक्रबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले लगानीकर्तालाई १२.९१३ प्रतिशत बोनस सेयरको प्रस्ताव गरेको हो । कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मुनाफाबाट उक्त प्रतिशत बोनससँगै ३.०८९ प्रतिशत नगद...
आज शनिबार (असोज ८) देखि बजाज पल्सर एभरेष्ट प्रिमियर लिग (ईपीएल) सुरु भएको छ । ६ वटा टोली सम्मिलित प्रिमियर लिगको चौथो संस्करण आजदेखि सुरु भएको हो । प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा काठमाडौं किंग्स इलाभेन र ललितपुर प्याट्रिओट् भिड्दै छन् ।...
चर्चित भारतीय अधिकारकर्मी तथा लेखक कमला भासिनको निधन
काठमाण्डाै - चर्चित भारतीय अधिकारकर्मी तथा लेखक कमला भासिनको निधन भएको छ । भासिनको ७५ वर्षको उमेरमा आज बिहान तीन बजे निधन भएको अभियन्ता कविता श्रीवास्तवलाई उदृत गर्दै इन्डियन एक्सप्रेसले जनाएको छ । भासिन क्यान्सर रोगबाट पीडित हुनुहुन्थ्यो । भासिनको...
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा विश्वका नेताहरूले के भने?
संयुक्त राष्ट्रसंघ : विश्वका नेताहरूले प्रत्येक वर्ष आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा विश्व र आआफ्ना क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयलाई जोडतोडका साथ उठाउने गर्दछन्। प्रत्येक वर्ष यस्ता केही आवाजहरू हाबी हुने गर्दछन् र विश्व राजनीतिक मञ्चमा तरङ्ग समेत पैदा गर्दछन्। यहाँ एसोसिएटेड...
गर्मी भगाउन युवकले खाए १० मिनेटमै डेढ लिटर कोल्ड ड्रिंक, ६ घण्टामा मृत्यु
गर्मी भगाउन खाइएको कोल्ड ड्रिंक एक युवकका लागि मृत्युको कारण बनेको छ । डेली मेलमा प्रकाशित रिपोर्टअनुसार चीनमा यस्तो घटना भएको हो । गर्मीबाट आएका २२ वर्षीय युवकले १० मिनेटमा डेढ लिटर कोल्ड ड्रिंक खाएका थिए । मृत्यु भएका युवकको...
३० मिनेट अघि नेपालखबर
४२ मिनेट अघि रातोपाटी
४७ मिनेट अघि उज्यालो अनलाईन